Mandrahona ny hanakana an’ireo karatra SIM tsy fanta-tompo ny mpandrindra fifandraisandavitra ao Mozambika · Global Voices teny Malagasy
Ao anatin'ny 10 andro dia ho voabahana ireo laharana tsy voarakitra.
Mpanoratra Dércio Tsandzana Nandika (es) i Gabriela García Calderón Orbe, Willy Mokhtari, miora
Voadika ny 12 Aogositra 2019 3:21 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, English, Português
mCel, iray amin'ireo mpandraharaha telo nahazo fahefana ara-dalàna handrakitra an'ireo karatra ao Mozambika. Sary: Dércio Tsandzana, 16 jolay 2019, navoaka nahazoana alalana.
Tranga efa tamin'ny taona 2010 no niseho, rehefa nitranga ireo hetsika mahery setra tao Maputo [teny frantsay] nanohitra ny halafon'ny vidim-piainana. Tamin'io taona io, farafahakeliny 13 no isan'ireo maty nandritra ireo fihetsiketsehana ireo ary namafy alahelo lalimpàka tao an-drenivohitra Mozambikana.
Ny tena nanamarika an'ireo fihetsiketsehana ireo dia noho izy hoe nokarakaraina tamin'ny alalan'ireo fitaovana efa mahazatra ho an'ny vanim-potoana, anisan'izany ireo telefona finday sy ireo tambajotra sosialy.
Nitarika ny governemantan'i Mozambika, notarihan'ny filoha Armando Guebuza tamin'izany fotoana izany, hamoaka lalàna ireo hetsika ireo ka hanerena an'ireo mpampiasa finday hanao filazana momba ny karatra SIM-n'izy ireo ao anatin'ny fe-potoana iray volana, lalàna iray nofenoin'ny didim-panjakana iray mivelatra kokoa tamin'ny taona 2015.
Marobe no nahita fanehoana fampihorohoroana miharihary tao anatin'io hetsika io noho ireo fihetsiketsehana tamin'io taona io, toy izay lazain'ny blaogy “Réflexions sur le Mozambique” manao hoe:
Ny fanontaniana izay tsy maintsy apetratsika amin'ny tenantsika dia izao manaraka izao: nahoana no tao aoriana kelin'ny fihetsiketsehana nokarakaraina tamin'ny alalan'ny sms ny governemanta no nihazakazaka hisakana an'ireo tolotra amin'ny finday? Nahoana no tsy natao izany fony voarahona tamin'ny alalan'ny sms ny solombavambahoaka José Mascarenhas mialohan'ny namonoana azy?
Ny niafaràny dia nampiana iray volana ilay fe-potoana, hatramin'ny 7 janoary 2011, saingy tsy maintsy fantatra fa hatreto, valo taona aty aoriana, tsy nisy mpandraharaha na iray aza tao Mozambika (Vodacom, Tmcel sy Movitel) nanafoana ireo karatra SIM tsy voarakitra any an-tanan'ireo mpampiasa azy.
Ny 28 jona 2019, Nanome folo andro ho fe-potoana farany ny Tomponandraikitra misahana ny fifandraisana ao Mozambika (ARECOM) mba hanaovan'ireo mpandraharaha ny fandraketana ireo rehetra mpampiasa ilay tolotra. Araka ny voalazan'ny gazety “O País”:
Tao anatin'ireo taratasy nalefan'ny Tomponandraikitry ny fifandraisana ao Mozambika tamin'ireo telo mpandraharaha ny finday, Vodacom, Tmcel ary ny Movitel, ampangain'ilay mpandrindra izy ireo ho nanitsakitsaka ny fitsipika mifehy ny fandraketana sy ny fandefasana an'ireo modiola famantarana an'ireo mpanjifa mampiasa karatra SIM, neken'ny lalàna 18/2015, tamin'ny 28 aogositra.
Tao anatin'ireny taratasy ireny, nalefan”ny mpandrindra tamin'izy ireo ny hafatrafatra dimy tohin'ireo fitarainana napetrak'ireo mpanjifa sy ireo Hery fiarovana sy fitandroana filaminana mikasika ny fiparitahan'ireo karatra SIM tsy voarakitra/na noraketina tamin'ny fomba tsy araka ny lalàna eny an-tsena.
1. Ao anatin'ireo 10 andro manaraka ny daty nandraisana an'ity hafatra ity, sakano ireo laharana rehetra tsy voarakitra sy voarakitra tamin'ny fomba tsy ara-dalàna, manitsakitsaka ireo andalana a) sy b) ao amin'ny artikla 6 amin'ny fitsipika voalaza eo ambony.
2. Araho ny fampanajàna ny andininy faha 11, andalana 1, izay milaza fa “ireo mpandraharaha sy ireo mpamatsy tolotra fifandraisana ho an'ny daholobe ary koa ireo mpiasa na mopaninjara dia omena alalana hivarotra karatra SIM”.
3. Gihazo avokoa ireo karatra SIM rehetra izay hita ivelan'ireo toerana ofisialy an'ireo mpandraharaha, mpiasa ary mpaninjara, satria izy ireny tsy mahafeno ireo fepetra voalaza ao amin'ny andalana 2 amin'ny fitsipika.
4. Sakano avokoa ireo laharana rehetra izay mandika ny artikla 10, andalana faha 3 amin'ny fitsipika voalaza eo ambony.
5. Ilazao ireo mpanjifa fa tokony ataony ara-dalàna ny momba azy.
Farafahakeliny, roa tamin'ireo mpandraharaha telo no nanaiky ilay fe-potoana farany napetraky ny ARECOM ary nisakana an'ireo laharana vitsivitsy tsy voarakitra, toy izay voalazan'ny “O País”.
Miomana ho amin'ireo fifidianana solombavambahoaka i Mozambika amin'ity taona ity, kasaina atao ny 15 oktobra.
Tamin'ny 2014, nahafahana nanara-maso ny fizotran'ireo fifidianana ny fampiasana ny finday noho ireo vovonana nomerika sy finday toy ny Olho do Cidadão et Txeka-lá.
Nandritra ireo fifidianana monisipaly tamin'ny 2018, ny vovonana “Voter Mozambique” dia nampiasa ireo mpanaramaso ny fifidianana mba hijery akaiky ireo fifidianana tany amin'ireo faritra maro isankarazany ao amin'ny firenena.
Amin'ity taona ity, marobe ireo fikambanana avy amin'ny fiarahamonia sivily no miezaka ihany koa hanara-maso ireo fanisana vato amin'ny alàlan'ireo vovonana nomerika, toy ny Ivontoerana ho an'ny demokrasia sy ny fampiroboroboana, Olho do Cidadão (ny mason'ny olom-pirenena) sy ny Ivo-toerana ho an'ny fahamendrehan'ny Vahoaka.
Olho do Cidadão et Txeka-lá dia nampiasa ny vovonana Ushahidi (izay midika hoe “fijoroana vavolombelona” amin'ny teny swahili), izay ahafahan'ireo olom-pirenena mandefa fanairana mikasika ny fizotran'ny fifidianana, amin'ny alalan'ny feo sy amin'ny alalan'ny hafatra a-ntsoratra, any amin'ny birao foibe iray atao hoe “Sala de Situación”. Ireo olom-pirenena mpanara-maso no asaina handefa sary sy lahatsary izay mety hampiseho an'ireo olana amin'ny andron'ny fandatsaham-bato ary handray anjara amin'ny fampangaraharàna ny zotran'ny fifidianana.
Amin'ny alalan'ny fanakanana an'ireo karatra tsy voarakitra sy ireo fanapahana fifandraisana vokatr'izany, dia efa andrasana fa ho very ny fahafahan'ireo olona sasantsasany miditra amin'ireo vovonan'ny fanarahamaso ny fifidianana.
Na dia fantantsika aza fa tato anatin'ireo taona vitsivitsy, dia nisy fitomboana fampiasana Aterineto tao Mozambika, mbola mitoetra ho ambany io (6,6%) araka ny voalazan'ny Institut national des statistiques (INE) (Ivontoerana nasionaly misahana ny antontanisa). 51% no salam-pidirana amin'ny Aterineto ho an'i Afrika atsimo, ny tena ambony indrindra ao amin'ilay tanibe araka ny voalazan'ny tatitra Hootsuite 2018.
Ny tena marina, ny fahitalavitra sy ny onjampeo ankehitriny no fomba fifandraisana tena hita ao Mozambika. 75% amin'ny vahoaka Mozambikana no voakasiky ny onjampeo, araka ny voalazan'ny Ivontoeran'ny Fifandraisana ao Mozambika.
Vokatr'izany, fantatra fa tonga tsy nampoizina ny fangatahan'ny ARECOM raha toa mbola mitohy mitoetra foana ireo fanahiana momba ny famantarana an'ireo tomponandraikitra amin'ireo fanafihana any amin'ny faritanin'i Cabo Delgado, avaratr'i Mozambika, taorian'ny fipoiran’ireo kaonty fako Facebook, noforonina avy tamin'ny alalan'ireo finday tsy voarakitra, izay faly amin'ireny fanafihana ireny, araka ny voalazan'ny Polisin'ny Repoblika ao Mozambika
Ny 15 jolay, notsiahivin'ny gazety elektronika “A Carta” fa ho nohenoin'ny Sampandraharaha nasionaly misahana ny fanadihadiana heloka bevava ao Nampula ireo mpandraharaha telo, momba ny fanadihadiana mikasika ny tsy fetezana araka ny lalàna hita any anatin'ny failon'ireo karatra.
Fanampin'izany, ny fampiasana an'ireo karatra ireo ihany koa mba hanatanterahana heloka bevava toa ireo halatra sy fisandohana any anaty aterineto atao amin'ireo mpampiasa ao Mozambika sy any ivelany dia arahana maso akaiky. Mikasika an'io, notakian-dRtoa Lehiben'ny Fampanoavanan'ny Repoblikan'i Mozambika ihany koa ny hanaovana ireo fandraketana araka izay haingana indrindra. Tamin'ny 2015, ny Minisitry ny Fifandraisana ao Mozambika mihitsy no nitaky an'io tamin'ireo mpandraharaha.
Nandika (fr) i Willy Mokhtari
Angola 7 andro izay
Mediam-bahoaka 08 Marsa 2022